Ciidamada ka tirsan dowladda oo ka cabanaya mushaar laaan Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ciidamada ka tirsan dowladda oo ka cabanaya mushaar laaan Maamulka magaalada Baledweyne ee dowladda ayaa waxa uu sheegay in wax mushaar ah aysan qaadan ciidamada taasi oo uu sababeeyay amni darada ka taagan magaaladaasi.
Iyadoo ay sii kordhayaan falalka amni daro ee magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa ayaa Maamulka dowladda ee magaaladaasi waxa uu u sababeeyay amni xumada mushaar laaan haysata ciidamada dowladda.
Sheekh Cismaan Barre Maxed, Guddoomiyaha Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay inaysan jirin cid mushaar siisa Ciidamada Dowladda ee ku sugan Magaalada Baladweyne islamarkaana loo baahan yahay in la taakuleeyo Ciidamada Dowladda oo uu tibaaxay inay yihiin kuwa leh mudnaanta koowaad sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiyha ayaa carabka ku dhuftay inay codsi u direen Madaxda Dowladda KMG ah taasi oo ku aaddan in Ciidamada Dowladda ee ku sugan Magaaladaasi ay helaan Mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeen, waxaana uu tilmaamay in gobolka uu ka jiro hoos u dhac ballaaran islamarkaana Dowladda KMG ah looga baahan yahay in arrimahaasi ay wax ka qabato.
Magaalada Baledweyne ayaa tan iyo markii ay la wareegtay dowladda KMG Soomaaliya waxaa ka jiray dhibaatooyin dhinaca amaanka ah,, iyadoo Hayadda u dooda xuquuqda aadanaha ay ku eedeysay Maamulka dowladda ee Hiiraan in uu xad gudubyo u gaystay dadka shacabka ah.